सुनको पासो बन्यो कान्तिपुर साप्ताहिकलाई गलपासो – MySansar
ग्राफिक्समा हत्या गरिएका भनी सनम शाक्यको यो फोटो राखिएको थियो।
साप्ताहिकमा हत्या गरिएका भनी छापिएका मान्छे भने जिउँदै थियो। उनले आफ्नो हत्या भयो भनी छापिएको पत्रिकाको फोटो राख्दै फेसबुकमा अङ्ग्रेजीमा लेखे- नेपाली मिडिया किन यस्तो लापरवाह र गैरजिम्मेवार भएको? साथमा फेसबुकको फिलिङ अप्सन छान्दै उनले डिसगस्टिङ लेखे।
आफ्नो हत्याको खबर आफैले पढ्नुपर्दा उनलाई कस्तो भयो होला? तपाईँहामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ। सनम त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जो हालै काठमाडौँको विमानस्थलमा भएको युएस बांग्ला एयर विमान दुर्घटनामा बच्न सफल भएका थिए। ‘विमान दुर्घटनामा बचेका उनलाई मिडियाले मारिदियो’ यस्तो प्रतिक्रियासमेत सोसल मिडियामा निकै देखियो।
बिहान साढे ८ बजे उनले आफ्नै हत्या भएको फोटोसहितको पत्रिका फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए। त्यसको झण्डै पाँच घण्टापछि उनले कान्तिपुर पब्लिकेशन्सबाट लेखिएको पत्र फेसबुकमा पोस्ट गरे। प्रशासन विभाग प्रमुख सुशील रावलले लेखेको पत्रमा क्षमा माग्दै भोलिको कान्तिपुर र आगामी अंकको प्रथम पृष्ठमा फोटोसहित भूल सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो।
सँगै साप्ताहिकले आफ्नो फेसबुक पेजबाट पनि क्षमा माग्यो।
अपडेट : भोलिपल्ट शनिबार कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो छापियो